Nofollow backlinks को लुकेको शक्ति के हो?
सबै वेबमास्टरहरूले एउटै कुराहरूको दावी गर्छन्. Dof को लिंक वेबसाइट अनुकूलन को लागि उपयोगी छ, जबकि nofollow बेकार छ. यद्यपि, यो वास्तवमा यो मामला होइन. जब तपाईं द्रुत लिंक इक्विटी बारे मात्र चिन्ता गर्नुहुन्छ यो एक मामलामा सही आवाज लगाउन सक्छ. लामो समय सम्म, यो दृष्टिकोण भनेको तपाईं धेरै लिङ्क निर्माण सम्भावना बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईले नरोकिएको ब्याकलिङ्कबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।.
यो धेरै रैंकिंग कारकहरु द्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ. सबैभन्दा पहिला, Google ले अझै पनि लिंक नगर्ने बारे चिन्ता गर्दछ र उनीहरूको ब्रान्ड प्रतिष्ठाको सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण छ. यसले तपाइँलाई एक स्वस्थ र गुणस्तर लिङ्क प्रोफाइल छ कि छैन भनेर संक्षेप गर्ने प्रयास गर्दा ब्याकलिङ्कको वेबसाइटमा ध्यान दिनुहुन्छ वा होइन।. यसबाहेक, कुनै पनि ब्याकलिङ्क ब्याकलिङ्कहरू अझै पनि अनुक्रमित गर्न सकिन्छ, जुन वेब स्रोत जीवित छ भनेर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ. Nofollow ब्याकलिङ्कहरू व्यापक मार्केटिंग फायदाहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्.
Google ले ब्याकलिङ्कहरू रद्द गर्न कसरी प्रतिक्रिया गर्दछ?
सत्य भनिएको छ, Google लाई दुरुपयोग र ब्याकलिंक नपढ्नुहोस्. लिंक रस को गुणवत्ता मा केवल एक अंतर संग, यो nofollow backlinks को माध्यम ले गुजरता छ. Google ले नोफिक लिङ्कहरूलाई स्वस्थ पछाडि प्रोफाइल प्रोफाइलको रूपमा मान्दछ. यदि एक ब्याकलिङ्क प्रोफाइलले मात्र backlinks dofollow समावेश गर्दछ, यो खोजी इन्जिनहरूको लागि संदिग्ध देखिन्छ. यस्तो अनौपचारिक प्रोफाइलले दण्ड पाउन सक्छ. त्यसोभए, फिक्री लिङ्कहरू एक सार्थक सुरक्षा नेट भएको छ.
नोफाइकल ब्याकलिङ्कहरूको अर्को लाभ यो हो कि तिनीहरूले खोज इन्जिन क्रल र तपाईंको साइट सूचकांकमा मद्दत गर्छन्. Nofollow लिङ्कहरूले Google लाई तपाईंको वेब पेजहरू मध्ये एक पार्स गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्दछ जसले पहिले ट्राफिक प्राप्त गर्नुभएन. यहाँ महत्वपूर्ण छ कि nof को लिङ्क अझै पनि सुनिश्चित गर्न खोज इन्जिन तपाईंको साइट को क्रल गर्न र क्रमांक गर्न सक्छन्, भले ही यो इक्विटी गुजरने वा टेक्स्ट कीवर्ड लंगर को नोट.
यो उल्लेख गर्न योग्य छ कि कुनै पनि लिंकहरु को प्रभाव को लागि दस्तक हुन सक्छ. धेरै वेबमास्टर्सहरू फ्रिक्वेन्सी ब्याकलिङ्क प्लेटफार्महरूसँग काम गर्न इन्कार गर्छन् किनभने उनीहरूले उनीहरूको व्यवसाय विकासको लागि प्रभावकारी हुन सक्दैनन्. समस्या यो हो कि उनि कुनै फाईल को लागी कुनै वास्तविक लिंक नहीं देख रहे हो. यदि तपाइँ एक प्लेटफर्मको एक महान सामग्री प्रकाशित गर्दछ जुन लिङ्कहरू मात्र नलिई प्रदान गर्दछ, यो तपाईंको लागि अझै पनि फाइदाजनक हुन सक्छ किनकि प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको सामग्री सान्दर्भिक र गुणस्तर पत्ता लगाउँछन्, यसलाई उनीहरूको सानो प्लेटफर्ममा साझेदारी गर्नेछ।. त्यसकारण, परिणामको रूपमा, तपाईं अझै धेरै कार्बनिक dofollow ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ.
यही कारण हो कि कुनै फाईल लिङ्कले हामीलाई धेरै तरिकामा लिङ्क इक्विटी पास गर्न सक्दैन, तर यो अझै पनि हाम्रा साइटहरूको लागि खोजी इन्जिन अनुकूलनको लागि बहुमूल्य छ।. त्यहाँ कुनै पनि संदेह छैन कि backlinks SERP मा वेबसाइट एक्सप्रेस सुधार गर्न को लागी. र एक्सपोजर, आफ्नो अवधि मा, तपाईंको साइट मा अधिक dofollow ट्राफिक उत्पन्न लिंक ल्याउन सक्छ.
मैले समाप्त गर्न चाहानुहुन्छ कि माफ गर्नुहोस् ब्याकलिंकहरू तपाइँको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्दछ, तर तपाईले कुनैपनि ट्यागको साथ ट्यागको लागि अवसरहरू परिवर्तन गर्नुपर्दैन।. यी लिङ्कहरू अनुक्रमणिका र थप लिङ्कहरू उत्पन्न गर्न मद्दत गर्न सम्भव छ Source .